Kiiboodh cusub oo sixir ah oo wata Aqoonsiga Taabashada | Waxaan ka socdaa mac
Kiiboodh cusub oo sixir ah oo wata Aqoonsiga Taabashada
Dhacdadii Apple ee 20-kii Abriil, badhtamihii gu’gii, waxay ahayd mid midabkeedu muuqdo iyo aalado cusub oo shirkaddu soo bandhigtay. Waxaan ku raacsanahay in warar badan oo la isla dhex maray ay rumoobeen, laakiin shirkaddu waxay la yaabtay qalab cusub. Tusaale ahaan, wuxuu noo soo bandhigay Keyboard-ka cusub ee Magic-ka ah oo wata ID ID oo laba nooc u kala socda.
Waxa weheliya iMac-ka cusub ee sida weyn loo wada sugayey ee dhammaan adeegsaduhu si weyn u sugayeen, kiiboodh cusub ayaa ku dhacay dukaamada Apple. Waxay umuuqataa inaysan macno lahayn laakiin waxaan kahadleynaa cusbooneysiinta Keyboard-ka sixirka oo aan dib loo cusbooneysiin dhowr sano kahor.
Shirkaddu waxay soo bandhigtay kumbuyuutar cusub oo sixir ah oo leh midabyo cusub, Taabashada Aqoonsiga, iyo xitaa furayaasha cusub ee emoji, Iftiiminta, Ha Dhibin, iyo qufulka Mac-gaaga.Waxaan sidoo kale yeelan doonnaa nooca lambarka leh.
Hareeraha ayaa hadda la socda kombiyuutarada cusub oo sidoo kale lagu soo bandhigay hooskooda, marka lagu daro qaadashada qaab wareegsan. Nooca ay shirkaddu suuq galisay illaa hadda, oo loo baabtiisay sida Keyboard Magic 2, ayaa la bilaabay 2015, laga bilaabo waqtigaas oo ay sii jirtay iyada oo aan wax cusbooneysiin ah.
Iyada oo ay weheliso furayaasha sixirka, Apple sidoo kale waxay cusbooneysiisay Magic Mouse iyo trackpad sixir si loogu daro xulashooyinka midabbada dheeriga ah. In kasta oo Apple ay ku siin doonto Magic Keyboard iyo Magic Mouse-ka cusub ee iMac, haddana ma cadda inta nooc ee la cusbooneysiiyay ay ku kici doonaan marka si gooni ah loo iibsado.
Waa inaan sugno si aan u aragno qiimaha ay shirkaddu ku dhejiso qalabkan marka si gooni ah loo iibsado. Waxaan rajeyneynaa inaysan aad ugu fuuleyn geedka canabka ah, sida ay yiraahdaan, iyo inay la sii joogi doonto isla qiimaheena illaa iyo hadda aan la leenahay moodelladii hore.
Xaqiiq ahaan, waa mid ka mid ah teebabka ugu wanaagsan ee Apple leeyahay. Fudud, xarrago leh oo aad u qurux badan oo hadda aad u shaqeynaya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Kiiboodh cusub oo sixir ah oo wata Aqoonsiga Taabashada
watchOS 7.4 qaybteeda sii daynta Musharrax hadda waa la heli karaa
Waxaan ugu dambeyntii haysannaa Apple AirTags